कोरोनाभाइरस हावामा बसदैन भन्ने सन्देश युनिसेफबाट आएको छैन - THIP Media
Home तथ्य जांच - Nepali कोरोनाभाइरस हावामा बसदैन भन्ने सन्देश युनिसेफबाट आएको छैन
कोरोनाभाइरस हावामा बसदैन भन्ने सन्देश युनिसेफबाट आएको छैन
फेसबुकको एउटा पेजमा एउटा फोटोलाई युनिसेफबाट जारी गरिएको सुचनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सन्देशमा दाबी गरिएको छ कि कोरोनाभाइरस हावामा बसदैन र हावाबाट प्रसारित हुँदैन। हामीले पत्ता लगायौं र उक्त सन्देश युनिसेफबाट आएको छैन भनेर थाहा पायौ। यद्यपि यो सत्य हो कि कोरोनाभाइरस हावामा बस्ने भाइरस होइन तर यो भाइरस केही समयको लागि हावामा झुन्डिएर बसेको अवस्था हुनसक्छ। हामी यस दावीलाई अर्धसत्य घोसित गर्दछौ।
युनिसेफ द्वारा जारी गरिएको भनेर एउटा सामाजिक मिडिया पोष्टमा यसो लेखिएको छ: “भाइरस हावामा बसदैन तर भुईंमा बस्न सक्छ, त्यसैले यो हावा द्वारा फैलिदैन।” क्याप्शनमा भनिए अनुसार फोटोमा उल्लेखित भाइरस कोरोनाभाइरस हो। उक्त पोष्टको स्न्यापशट तल दिइएको छ र यसको एक संग्रहीत संस्करण यहाँ हेर्न सकिन्छ।
के यो युनिसेफबाट आएको सल्लाह हो?
होइन। युनिसेफका स्वास्थ्य अधिकारी डा प्रफुल भारद्वाजले विश्वास न्यूजसँग कुराकानी गर्दै प्रष्ट पारेका छन् कि युनिसेफले त्यस्तो कुनै दिशानिर्देश वा सल्लाह जारी गरेको छैन।
के कोरोनाभाइरस हावामा फैलिन्छ? वा यो जमीनमा बसोबास गर्छ?
डब्ल्यूएचओ ले नोभेल कोरोनाभाइरसलाई हावाबाट फैलिने भाइरसको रूपमा वर्गीकरण गरेको छैन। डब्ल्यूएचओले आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख गरेको छ, “वर्तमान प्रमाणले कोभिड-१९ व्यक्तिहरु बीच प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष (दूषित वस्तुहरु वा सतहहरु द्वारा), वा संक्रमित व्यक्तिहरु सँग मुख र नाक स्राव द्वारा नजिकको सम्पर्क बाट फैलिन्छ। यसमा थुक, श्वासप्रश्वासको स्राव, वा स्रावका बुंदाहरु समावेश छन्। यी सबै संक्रमित व्यक्तिले खोकी, हाच्छिउं, वा गाना गाउँदा मुख वा नाकबाट बाहिर निस्कन्छन्। संक्रमित व्यक्तिसँग नजिकको (१ मिटर भित्र) सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति त्यस्ता बुंदाहरु मुख, नाक वा आँखामा जाँदा कोभिड-१९ बाट संक्रमित हुन्छन्।” डब्ल्यूएचओ ले पनि व्यक्तिहरुलाई १ मिटरको दूरी कायम गर्न सल्लाह दिएको छ।
यसको मतलब यो हो कि भाइरसलाई ‘एयरबोर्न’ (हावामा बस्ने खालको भाइरस) को रूपमा वर्गीकृत नगरिएता पनि यो संक्रमित व्यक्तिबाट बाहिर निस्के पछि भुइँमा खस्नु अघि केही समय हावामा झुन्डिएर बस्न सक्छ (उदाहरणका लागि हाच्छिउं गर्दा)।
तसर्थ, कोरोनाभाइरस प्राविधिक रूपमा हावा द्वारा फैलिने भाइरस होइन तर पनि छोटो अवधिका लागि यो हावामा झुन्डिएर बस्न सक्छ। त्यसैले मास्क र सामाजिक दूरी जस्ता सावधानीहरूलाई गम्भिरपुर्वक लिनुपर्छ।
Previous articleयो मोबाइल गेम एउटा राम्रो व्यायाम हो तर कोभिड -१९ को मान्य परीक्षण होईन
Next articleके कुल्ला गर्नु कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रभावकारी प्रमाणित भइरहेको छ?